Sarimihetsika fanentanana - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Ireto ny zavatra ataonay voasoratra ao amin'ny faritra fanentanana.
Tokony efa misy ny hetsika tsirairay.
Vogelschiss gegen Hass - karatra mena ho an'ireo mpandefa fankahalana
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 16. Janoary 2013
Shit miverina anio, manohitra #Hate misy iray eo amin'ilay harato ankehitriny Fanefitry. @PixelHELPER mandefa fofona vorona ho an'izay rehetra mankahala fankahalana. Manome vola amin'ny paypal@PixelHELPER.tv & manoratra anay izay tokony hahazo ny fandefasana manaraka. Taratasy 1 handeha @_donalphonso avy amin'ny @world
Ao amin'ny aloky ny fitondran-tena amin'ny fametrahana ny kanto #Fencing4Humanity, famolavolana ny sisintany ivelany eoropeana, dia nandry ny vorona voalohany. Avy eto dia miaraka #Bird shit manohitra #Hate niady tamin'ny Internet.
Vogelschiss trano any Maraoka
Any Maraoka lavitra dia manangana tranobainay Vogelschiss izahay mba handefasana valopy Vogelschiss an'ohatra kely ho an'ny olona izay mombamomba ny #HateSpeech.
Maka tahaka ny zavamaniry ny vorona
Vorona izay miasa amin'ny fankahalana
Vogelschiss gegen Hass - karatra mena ho an'ireo mpandefa fankahalana June 15th, 2020Oliver Bienkowski
Fananganana fototra fa tsy vanja milevina hanohitra ny fiovan'ny toetr'andro
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 5. Novambra 2011
Ny fiatoana hazo dia tototry ny zana-kazo sy ny zezika vita
Fananganana fananganana fa tsy tany vanja. Ny gazety lehibe indrindra any Maraoka androany dia mitatitra ny tolo-kevitray any amin'ny Parlemanta Australie mba hangataka ny Mpanjaka Maraokana hanome antsika ilay fiaramanidina Hercules-C130 mba hahafahantsika mamadika azy io ho famelomana indray ny alan'i Maraoka sy Aostralia. Ny orinasa kely iray eto amin'ny toby Maraokana no heverina fa hamokatra tohatra hazo izay hariana any aoriana. Raha tsy misy ny fanampian'ny King of Maroc dia tsy misy azontsika atao. Koa satria tsy namaly ny taratasinay farany izy, dia tsy mieritreritra firy an-tsehatra, fa faly amin'ny zava-tsy ampoizina.
Hazo avy amin'ny mpanonta 3D
Fananganana fototra fa tsy vanja milevina hanohitra ny fiovan'ny toetr'andro Aprily 21st, 2020Oliver Bienkowski